Bathroom Towel Racks Brushed Nickel Stainless Simbi
musha / zvishongedzo / Bathroom accessories / Bathroom Towel Racks Akatsva Nickel Stainless Simbi
tauro rack ine bhawa inogadzirwa kubva kuWOWOW yakasimba 304 Brushed Nickel simbi, NON-mapurasitiki, ichivimbisa kusimba uye kurarama kwenguva refu. Iyo inogona pamwe kufamba maawa makumi mana nemasere emunyu akapfapfaidza anotarisa, kuwana zvinodiwa kunze.
KUCHENGETA KWAKAWANDA: 25-padiki yakareba kamuri yekuzorora masherufu nematauro racks, yakakwana kabhodhi nzvimbo pamatauro ako, zvipfeko uye zvichingodaro.
RUSTPROOF: Yakagadzirwa yeMhando 304 premium giredhi rakapwanywa Nickel simbi, ichidzivirira kune ngura & ngura uye inoda kuderera kuchengetedza. Inokodzera mamiriro ekunyorova akafanana nekamuri yekuzorora nekicheni.
ZVAKANAKA PEDZA: Brushed Nickel simbi yekupedzisira, kuvaka kuti utsungirire zuva rega rega kukwenya, kuora uye kusvibisa.
RINOGONESA RAKANAKA: Hardware pack uye madhairekitori akaisirwa mukati mehombodo. Screws akavakwa kubva kuSUS 304 Brushed Nickel simbi uye ngura. CHAKAVANZWA CHIKORO - Zvese screws zvinosanganisira zvishongo ngowani. Zvikwiriso hazvioneke mushure mekumisikidzwa - zvinotyisa uye chic chitarisiko.